Taliyaha ciidanka xoogga dalka ‘Odawaa’ oo kormeer ku tagay xerada 21-aad + (SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Taliyaha ciidanka xoogga dalka ‘Odawaa’ oo kormeer ku tagay xerada 21-aad +...
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – General Odawaa Yuusuf Raage, taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo iminka ku jira safar uu Ku marayo Xarumaha Ciidanka Xoogga Dalka ee Deegaanada Galmudug ayaa Talaadada maanta ah gaaray Xarunta Taliska Qaybta 21-aad ee Magaalada Dhuusamareeb.
Taliyaha ayaa kormeer ugu tagay Ciidamada dhulka Xoogga Dalka ee fadhigoodu yahay xeradaas, kuwaas oo kujira Diyaar garow sare.
Taliyaha ayaa kormeeray Xafiisyada Taliska iyo rugaha ciidamada Xoogga ee Magaalada Dhuusamareeb oo haatan ah Caasimadda Dowlad Goboleedka Galmudug.
Kormeerkan waxaa ku wehliyay Taliyaha Xoogga, saraakiil ka tirsan qaybaha 21-aad iyo 27-aad ee xoogga dalka sida Taliyaha Qaybta 21-aad General Cabdicasiis Cabdilaahi Cabdi (Qooje) iyo saraakiil kale.
Ugu dambeyn, Taliyaha ciidamada Xoogga dalka Soomaliya Generaal Odawaa ayaa mudddooyinkii dambe wuxuu ku sugnaa deeganada Maamulka Galmudug, halkaasi uu ugu kuurgalayay xaaladda Ciidamada Xoogga dalka.
Taliyaha ciidanka xoogga